सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: November 2008
दिवंगत गायक/संगीतकार राम थापालाई नजिकबाट चिन्ने लोकगायक हुन्- जयनन्द लामा । एउटा सामान्य प्रहरीको जागिरे राम थापा, विश्वकै उत्कृष्ट दस गीतमा पर्न सफल भएका थिए । ऋतुहरूमा तिमी... बोलको गीत विश्वका उत्कृष्ट दसमा परेपछि 'वरिष्ठ संगीतकर्मी हुन पुगेका थिए राम थापा । कस्ता थिए त राम थापा ? उनका सहकर्मी जयनन्द लामाबाट-०२७ देखि ०३१ सालसम्म म कमलपोखरीमा डेरा लिएर बसेको थिएँ । डिल्लीबजार, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सालिकअगाडि भैरवनृत्य दल थियो । नृत्य दलका संस्थापक गुरु भैरवबहादुर थापाको ज्यान मोटो थियो । उहाँ नृत्य सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो । म उहाँको सहायक भएर हिँड्थे । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकका लागि हामीले विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने भयो । त्यसै क्रममा कार्यक्रमको तयारीमा विभिन्न स्कुल, कलेज, संघसंस्थाका कलाकारलाई प्रशिक्षण दिन महेन्द्र पुलिस क्लबमा प्रशिक्षक भएर पुग्यौँ । कमलपोखरीकै स्थानीयवासी कृष्ण थापा मेरा साथी थिए । कृष्ण र म सँगै बक्सिङ सिक्थ्यौँ । म कृष्णको घरमा गइरहन्थेँ । उनका बुबा-आमाले मलाई आफ्नै छोराको व्यवहार गर्थे । त्यतिवेलासम्म रेडियोमा मेरा केही गीत रेकर्ड भइसकेका थिए । दुई-तीनवटा गीत हिट भएपछि मेरो पनि चर्चा सुरु भयो । कृष्णका भाइ राम थापा महेन्द्र पुलिस क्लबमा प्रहरीको जागिरे रै'छन् । उनले भैरवबहादुर थापा, कुमार बस्नेतको नाम सुनिरहेका रै'छन् । मलाई पनि चिन्दा रै'छन् । तर, मैले राम थापालाई चिनेको थिइनँ ।
राम बिचरा निकै दुःखी थिए । १५-१६ वर्षको एक मात्र छोरो अकालमा मर्‍यो श्रीमती वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान गएकी छिन् । आर्थिक रुपमा पनि निकै कमजोर थिए । काठमाडौंकै बासिन्दा भए पनि दासत्व प्रवृत्तिबाट उनी निकै पीडित थिए ।एकदिन कृष्णले मलाई घरमा बोलाए । उनले बोलाएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र राति नौ बजेतिर म कृष्णको घरमा पुगेँ । कृष्णको बुबा-आमाले भन्नुभयो, 'रामलाई पनि कलाकारिता क्षेत्रमा लगाउनुपर्‍यो । यो पुलिसमा छ ।' हाम्रो पहिलो चिनाजानी त्यहीँ भएको थियो । हामीले त्यसभन्दा अगाडि बुद्धि परियारलाई नृत्य कलाकारका रूपमा महेन्द्र पुलिस क्लबमा तानेका थियौँ । त्यही भएर हुनुपर्छ, उहाँहरूले पनि रामलाई त्यहाँ तान्नुपर्‍यो भन्नुभएको । रामकी आमाले मलाई एक गिलास रक्सी दिँदै भन्नुभयो 'राम गिटार पनि बजाउँछ । यसलाई त्यतातिर तान्नुपर्‍यो ।' मैले रामलाई सोधेँ, 'के-के जानेका छौ ?' रामले भने, 'मैले केही पनि जानेको छैन । अलि-अलि गिटार बजाउँछु । गीत गाउने कोसिस पनि गर्छु ।' यति भनेपछि राम हतारमा देखिए । एकछिनपछि अर्को घरमा पुगे जहाँ उनी सुत्थे ओठमा बिँडी च्याप्दै गिटार बजाउँदै प्रवेश गरे । उनीहरूको परिवारमा बिँडी, रक्सी खान रोकतोक रै'नछ । बुबा-आमाले पनि रामसँग मागेर बिँडी खाँदा रै'छन् । गिटारमा औँला नचाउँदै एउटा हिन्दी गीत गाएर सुनाए । गीत थियो- जिन्दगी एक सफर हे सुहाना, आजकल क्या हो किस्ने जाना.... । त्यसपछि उनले किशोरकुमारका अरू गीत प्नि सुनाउँदै गए । रामले गीत राम्रो गाए । म त लोकपरिवेशमा हुर्केको मान्छे, मैले उनलाई आधुनिक, हिन्दी गीतले त चल्दैन । लोकगीत आउँदैन तिमीलाई भनेँ । अनि, रामले कुमार बस्नेत दाइको मंसिरै महिनामा... मैले गाएको मुलाको चाना....गीत गाएर सुनाए । गिटार बजाउन अलिअलि जानेका रै'छन् । गीत गाउन पनि अलिअलि जान्ने । उनले गाएको सुनेँ । तर, म को नै थिएँ र ? भैरवगुरुको पछि लागेर अलिअलि नाच्न, गाउन जानेको थिएँ । भर्खर-भर्खर नाम चल्न थालेको थियो मेरो, त्यसकारण मैले रामलाई केही वचन दिन सकिनँ ।त्यसपछि राम र मेरो दैनिकजसो भेट हुन थाल्यो । हाई-हेल्लो भइरहन्थ्यो । म स्कुल, क्याम्पसमा कार्यक्रम गर्नमै व्यस्त हुन्थेँ । महिना, वर्ष बिते । अचानक एकदिन फेरि राम भेटिए र भने, 'मैले पुलिसको जागिर छोडेँ नि !' त्यसपछि मेरा स्टेज कार्यक्रममा गिटार बजाउन बजाउन थाले रामले । उनको मुखमा संगीत थियो । तर, व्याकरण थाहा थिएन । म पनि खासै जान्ने होइन, लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी बनेको थिएँ । एउटा संस्था थियो एभरेस्ट कल्चर सोसाइटी । त्यसका मालिक सहदेव सम्सेर राणा र स्वर्गीय अधिराजकुमारी जयन्ती शाह हुनुहुन्थ्यो । म त्यस कल्चरको कार्यकर्ता थिएँ । मालिकहरू राम थापा र ती कलाकारको नामै पनि सुन्न चाहन्नथे । त्यसको कारण थियो- उनीहरूलाई केही पनि आउँदैनथ्यो । तर, मैले चाहिँ उनीहरूलाई काखी च्यापेर हिँडिरहेको थिएँ । मैले राम र ती कलाकारलाई अनुहार नदेखिने मयुर, याक, ड्रयागन नाचहरूमा हाल्थेँ ।एक वर्षपछि हो क्यारे, ती मालिकले भने, 'लामा ! तिमी ती दुईजनालाई निकाल । नत्र, हामी तिमीलाई निकाल्छौँ,' । अरु वेलामा नभए पनि तलब लिने वेलामा त उनीहरूको नाम जान्थ्यो । मैले राम र ती कलाकारलाई छोड्न चाहिनँ । उनीहरूले मलाई निकालिदिए । अब कहाँ जाने ? हामी तीनैजना सडकमा आइपुग्यौँ । पहिला भैरवगुरुलाई निकालेर अर्कालाई हर्ताकर्ता बनाएका थिए । त्यसैले मलाई लगेका थिए । मलाई पनि निकाले । म त फाट्टफुट्ट रेडियोमा गीत पनि गाउँथे । राम र ती कलाकारले पनि रेडियोमा गीत गाउने चाहना व्यक्त गरे । मैले नै भ्वाइस टेस्ट गर्न लगाएँ । दुवै पास भए । रेडियोमा कहीलेकाहीँ मात्र गीत गाउन पाइन्थ्यो । म राम र त्यस कलाकारलाई लिएर भैरवगुरुकोमा पुगेँ । गुरुले 'अधिराज्यभरि कलाकारहरूको सांगीतिक भ्रमण राखौँ न त' भन्नुभो । हामी अधिराज्यव्यापी एकवर्षे सांगीतिक 'टुर' मा लाग्यौँ । त्यही वेला हो राम र त्यस कलाकारले भैरवबहादुर र चतुर्भुज आशावादी गुरुको पछि लागेर गाउन, बजाउन, प्रहसन गर्न, नाच्न सिकेको । मैले युरोपतिरको भ्रमण गरिसकेको थिएँ । उनले पनि बाहिरी मुलुक भ्रमण गर्ने इच्छा देखाए । बाहिर लोकसंगीतको मात्र माग हुन्थ्यो । त्यसैले मैले रामलाई नेपाली लोकभाका पस्कन सल्लाह दिएँ । लोकभाका, लय संकलनका लागि म र राम गाउँ-गाउँ पुग्यौँ ।म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जागिरे भएँ । राम थापाले रेडियो नेपालमा कार्यक्रम सञ्चालकको जागिर पाए । अर्का ती कलाकार अस्थायी रूपमा नाचघरमा जागिरे भए । ०४० सालमा अचानक म रेडियो नेपालमा लोकगीत प्रबन्धक भएर गएँ । त्यतिवेला आधुनिक गीतका प्रबन्धक नातिकाजी, शास्त्रीय संगीतमा शिवशंकर अनि वाद्यवादन संगीतमा तारादेवी दिदी प्रबन्धक हुनुहुन्थ्यो । राम त्यतिवेला कार्यक्रम सञ्चालकभन्दा माथि जान सकेका थिएनन् । रामका बारेमा नातिकाजी, शिवशंकर, तारादेवी दिदीलाई मैले यस्तो प्रतिभाशाली कलाकारलाई कार्यक्रम सञ्चालक मात्र बनाइरहनु हुन्न । उनलाई हाम्रो शाखामा ल्याउनुपर्छ भनेँ । उहाँहरूले पनि रामको प्रतिभा मनन गर्नुभो अनि हामी गएर महानिर्देशक भोग्यप्रसाद शाहलाई रामलाई हाम्रो शाखामा ल्याउनुपर्‍यो भन्यौँ । राम थापा सोझा थिए । उनी कहिल्यै रिसाउँदैनथे । मेरो मुख त अलि छुचो छ । म रिसाएँ भने जस्तो शब्द पनि बोल्छु । तर, रामले कहिल्यै तुच्छ शब्द बोलेनन् ।०४६ तिर रेडियो छाडेँ । विदेशतिर लागेँ । केही वर्षपछि र्फकेर आउँदा पनि राम उही पदमै रै'छन् । उनीभन्दा जुनियर, केही पनि नजान्नेहरू माथिल्लो तहमा पुगिसकेका । मलाई रिस उठ्यो । गएर सञ्चारमन्त्री, सञ्चार सचिव खै को थिए, रेडियोका महानिर्देशक, निर्देशक मुकुन्द आचार्य, शैलेन्द्रराज शर्माहरूसँग चर्किएँ, 'रामजस्तो प्रतिभावान् कलाकारलाई अहिलेसम्म पनि शाखा अधिकृत किन नदिएको ?' धेरैचोटि गएर कराएपछि रामलाई लोकगीत प्रबन्धक बनाए । तर, यो कुरा मैले रामलाई कहिल्यै खोलिनँ । त्यसपछिका दिनमा कहिलेकाहीँ भेटघाट भइरहन्थ्यो । म पनि आफ्नै धुनमा लागेँ । उनी पनि वरिष्ठ संगीत-संयोजक भए ।पछि, ०५८ सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको एउटा कार्यक्रममा उनले पहिला जस्तो राम्रो किसिमले गाउथेँ, त्यो गर्नै सकेनन् । मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो । रामलाई सोधेँ, 'के हो थापाजी, तपाईंलाई के भो ? कि त फेरि लगाउन -रक्सी पिउन) लाग्नुभो ?' रामले भने, 'अँ, ...यस्सो अलि-अलि...' । मैले ज्यानैले नसहने गरी त पिउनु भएन नि !' भनेर सम्झाएँ । त्यसको एक-डेढ वर्षपछि उनलाई जन्डिस भएछ । उनले मुख बार्न सकेनन् । उनी बित्नुभन्दा एक महिनाअघि हो क्यारे, रेडियो नेपालमा उनलाई भेटेको थिएँ । उनका खुट्टामा घाउ भएको रै'छ । आँखा पहेँला थिए । मैले तपाईंलाई सन्चो छैन । आराम गर्नुस् । यसरी लापर्वाही गरेर कहाँ हुन्छ । जन्डिस जस्तो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ भनेँ । राम बिचरा निकै दुःखी थिए । १५-१६ वर्षको एक मात्र छोरो अकालमा मर्‍यो श्रीमती वैदेशिक रोजगारीका लागि जापान गएकी छिन् । आर्थिक रूपमा पनि निकै पीडित थिए । काठमाडौंकै बासिन्दा भए तापनि दासत्व प्रवृत्तिबाट उनी निकै पीडित थिएँ ।दिवंगत हुनुभन्दा ५-६ दिनअघि मात्रै रेडियोमा उनलाई भेटेको थिएँ । उनको शारीरिक हालत जीर्ण देखिन्थ्यो । अर्को एउटा साथी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ र मैले थापाजीलाई गाली गर्‍यौँ । यस्तो बिरामी हुँदा पनि अफिस आइरहने ? आराम गर्नुस् । रामले भने, 'सरकारी जागिर हो । एक दिन नआए हाजिरमा चिनो लगाउँछन् । फेरि, घर बसेर के गर्नू, एक्लै बोर हुन्छ ।' मैले भनेँ, 'तपाईंको जागिर कसले खोस्छ, कसलाई भन्नुपर्छ, म भन्छु । तपाईं घर जानुस् ।' म पाजी को थिएँ र ? मैले उनको जागिर रोकिदिन सक्ने ? सायद यही सोचेर होला राम मुसुक्क हाँसे । अनि मोटरसाइकल चढेर हिँडे । थापाजी गएको देखेर त्यहाँका अन्य कर्मचारीले 'अब चाहिँ थापासर बाँच्छन् कि...' भनेका थिए ।तर, अपशोच ! बिहीबार बिहानै तिनै राम थापा यस संसारमा नरहेको खबर सुन्नुपर्‍यो । बिहीबार दिनभरि आर्यघाटमा उनको मलामी भएर गएँ । तर, अपशोच लाग्यो । विश्वमै नेपालको झन्डा फहराउने स्रष्टालाई श्रद्धाञ्जली दिन त्यहाँ न कुनै नेता आए, न त रेडियोका हाकिम नै । निष्प्राण रामप्रति यो राज्यले गरेको व्यवहार देख्दा म पनि बेकारमा यस लाइनमा लागेछु । बरु कुनै पार्टीको कार्यकर्ता बनेको भए त अरू नभए पनि पार्टीको झन्डा त ओढाउँथे भन्ने लागेको छ ।-लक्ष्मण सुवेदी
Posted by Narthunge at 5:20 AM No comments:
Posted by Narthunge at 4:59 AM No comments:
"श्रेष्ठजी ! तपाईंको घर नजिक अस्पताल भएको कुरा सुनेको छु, डाक्टरहरूसँग तपाईंको हेलमेल राम्रै होला । मलाई कतैबाट चार ग्रेन मफिर्न अथवा पोटासियम साइनेड ल्याइदिए म तपाईंलाई जीवनको सच्चा साथी सम्झने थिएँ र तपाईंको सहयोग म सदा सम्भिmरहने नै छु पनि ।"
यो भनाइ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आˆना निकटस्थ मित्र हरि श्रेष्ठलाई कुनै दिन अनुरोध गर्नुभएको थियो । हरि श्रेष्ठ देवकोटाका मित्र मात्र नभएर उहाँ आफैँ प्रतिभाशाली र प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । प्रजातन्त्र रेडियो नेपालको स्थापनाकालदेखि नेपाल भाषामा समाचार वाचन गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले ८० वर्षको उमेरसम्म पनि समाचार वाचन गरिरहनुभएको थियो । यस दृष्टिले उहाँ विश्वकै सबैभन्दा बढी उमेरका समाचारबाचक हुनसक्नुहुन्छ । साहित्यमा पनि उहाँका उपन्यास, कविता, नाटक संस्मरणका झण्डै एक दर्जन कृतिहरू प्रकाशित छन् ।
मेरो अगाडि मृत्युको भयङ्कर रूप खडा भइसकेको छ । अहिले कृत्तिम शरीर धारण गर्दैछु । आकाशका तारामण्डल छुन खोज्छु, सक्तिनँ । मैले आफूलाई शान्ति दिन सकिनँ । म उठ्नसके आफैँ पनि आत्महत्या गर्ने थिएँ, अनि मेरा बालबच्चालाई पनि ... । म यस दुनियाँलाई बोझ र चिन्ता दिन चाहन्न । अरूले मलाई बुद्धिजीवी भने तापनि म आˆनो निमित्त मूर्ख भएँ, अन्धो भएँ, म त्यो ज्योतितिर ढल्कन खोज्छु तर अन्धकारले मलाई बोलाइरहन्छ । म यो असहृय वेदना खप्न सक्तिन । पोटासियम साइनेड कसैले दिए म उसलाई आˆनो जीवनको सच्चा साथी सम्झने थिएँ । म अपराधी हुँ, त्यसैले म अपराध मेट्न चाहन्छु । कसैले सके मेरा प्रकाशनका नाम पनि । म विलीन हुन चाहन्छु, मरुभूमिमा जलकणझैँ अब कसले मलाई न चिनून् ।
उहाँ थप्नुहुन्छ- मैले महाकविको अस्वस्थताको समाचार नयाँ समाजका सम्पादक बालमुकुन्द पाण्डेलाई छाप्न लगाएँ । त्यसपछि देवकोटालाई अस्पतालमा भेट्न आउनेहरूको भीड लाग्न थाल्यो । उहाँ केही फुर्तिलो हुनुभयो । एकदिन उहाँले बिहानै दाह्री खौरेर ऐनामा आˆनो अनुहार राम्ररी हेर्नुभयो । त्यसपछि श्रीमतीतिर फर्केर भन्नुभयो- "बज्यै Û अब पनि मरुँला त म ? त्यही प्रसन्न मुद्रामा रहेको केही समयपछि एक्कासि डाक्टर मिलर भित्र आएर पशुपति लैजाने सङ्केत गरे ।"
मैले एक पटक उहाँलाई चितवनमा जग्गा लिन खोजेको कुरा सुनाएँ । उहाँले त्यही विषयमा सोह्र पेज लामो निबन्ध लेखिदिनुभयो । उहाँको मृत्युपछि मैले त्यो निबन्ध खोजी गरे तर चार पेजमात्र पाउन सकेँ । जसको शीर्षक थियो- हामी आˆनो दुनो पहिलो सोझ्याउँछौँ ।
त्यस्तै महाकविको निधनपछि टुँडिखेल खरीको बोटको गोलमञ्चमा शोकसभा भएको थियो । त्यो सभामा धेरैजनाले आ-आˆना कविता र उद्गार सुनाए । डाक्टर मिलरलाई पनि बोल्न दिइयो तर हरि श्रेष्ठले देवकोटाको अन्तिम कविता पाठ गर्न खोज्दा आयोजकले दिएनन् । उहाँ भन्नुहुन्छ- जसको निम्ति शोकसभा भएको थियो उनैको अन्तिम कविताले स्थान नपाएको त्यो दिन म कहिले बिर्सन सक्दिन ।"
Posted by Narthunge at 5:18 AM No comments:
२०१३ साउन १ गते चीनको विश्वप्रसिद्ध ग्रेटवालमा पुग्यौ" । मैले कक्षा ८ मा पढेको चीनको ग्रेटवाल वास्तवमा 'भू-ड्रयागन'को ढाडमा चढ्न पुगेजस्तो लाग्यो । रमाउ"दै खूब हर्षे नाचे" पनि । ग्रेटवालमा डेढ घन्टा बितायौ" । त्यो भू-ड्रयागनबाट आफ्नो आयुको वृद्धि भएको अनुभूति भयो । यही ग्रेटवालको मुख्य द्वारको एक छेउमा हाम्रो लन्चको कार्यक्रम थियो । यस अवसरमा भीमदर्शन रोका र चित्तधर हृदयले कविता सुनाउनुभयो । धर्मराज थापाले 'ए चिनिया" नानी, यो पिरती नौलो राखे मनैमा' गाउनुभयो । मैले गिलासको जलतरङ्ग बजाए" । खिमबहादुरले सारङ्गी बजाउनुभयो । सबैले खूब रमाइलो माने ।
साउन २ गते नेपाली सांस्कृतिक प्रतिनिधिमण्डलका तर्फाट प्रीतिभोज गरयिो । भोजमा विशेष तामाको तरकारी, गुन्द्रुक र भटमास सा"धेको अचार पनि राखिएको थियो । प्रीतिभोजका सर्न्दर्भमा नेपालका तर्फाट पशुपतिनाथको मन्दिरसहितका अन्य कलात्मक वस्तुहरू अध्यक्ष माओत्सेतुङ्लाई उपहारस्वरूप प्रदान गर्‍यौ" । साथै, बालचन्द्र शर्माले 'तिब्बतका राजा स्रङ्चङ् गम्पोका दर्ुइवटी रानीमा एउटी चिनिया" राजकुमारी श्वेत तारा र दोस्री नेपालकी राजकुमारी भृकुटी हरति तारा यी दिदीबहिनीको सम्बन्धबाट चीनसित नेपालको धेरै निकटतम् सम्बन्ध थियो र छ पनि' भनेर ऐतिहासिक चर्चा गर्नुभयो । त्यसपछि बालकृष्ण समले पनि तिब्बतका राजा र महाचीनका बादशाहको निम्तोमा नेपालबाट चीन पुगेका कलाकार अरनिकोले प्यागोडा शैलीमा आफ्नो कलाकारतिाबाट तिब्बत र चीनमा गर्नुभएको योगदानबारे लामो व्याख्या गर्दै 'आज हामी त्यही मित्रतालाई फेर िब्यू"ताउन आएका हौ"' भन्नुभयो ।
स्वागत समारोह विर्सजन हुनुअगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउएनलाइ पनि आह्लादित हु"दै भन्नुभयो, "तपाईंहरूले अरनिको तथा अन्य ऐतिहासिक महापुरुषहरूको यस्तो नाम लिनुभयो, जो मलाई नै थाहा थिएन । चीनका धेरैजसो मानिसले पनि यो इतिहास थाहा नपाएका हुनसक्छन् । आज तपाईंहरूले अरनिको, भृकुटी, बुद्धभद्र र मञ्जुश्रीजस्ताको इतिहास हामीलाई अवगत गराइदिनुभयो, हामी अत्यन्त खुसी छौ" र आभारी पनि छौ" । चीन र नेपालको मित्रता द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नेछ । म छिट्टै तपाईंहरूको सुन्दर देश नेपालमा आउ"दैछु ।" यसै सर्न्दर्भमा धर्मराज थापाले माओत्सेतुङ्लाई र मैले प्रधानमन्त्री चाउएनलाइलाई भादगाउ"ले टोपी लगाइदियौ" ।
साउन ३ देखि ५ गतेसम्म थ्रेटिकल इन्स्िटच्युट, डान्स एन्सेम्बल र अन्य सङ्गीत स्कुलहरूका लोकनृत्य, गीत, पेकिङ् अपेरा र रसियन ब्यालेहरू मात्र हर्ेर्ने काम भयो । पेकिङ्को १० दिने कार्यक्रम सक्यौ" । साउन ६ गते रेल चढेर सेनयान भन्ने ठाउ"मा पुग्यौ" । त्यहा" पनि सांस्कृतिक आदानप्रदानको कार्यक्रम समापन गरेर साउन ७ गते सेनयाबाट रेल चढेर एक सय माइल टाढा दक्ष्ँिणमा भएको विशाल सनयात सेन स्पात कारखाना हेर्‍यौ" । साथै, उच्चकोटिका रसियन ब्याले र चिनिया" अपेरासमेत हेर्‍यौ" । अपेरा सिकाउने मुख्य स्कुलको पनि अवलोकन गर्‍यौ" । अनि, साउन १० गते सेनयानबाट हिल ट्रेन चढेर धेरै माथिको डा"डामा छ्याड्छु भन्ने ठाउ" पुग्यौ" । त्यहा" फिल्म निर्माण गर्ने तरकिा हेर्‍यौ" ।
त्यहा"बाट साउन १२ गते डेरेन भन्ने ठाउ" पुगियो । यही डेरेनमा अङ्ग्रेजी कविताको गोष्ठी थियो । गोष्ठीमा बालकृष्ण सम र भीमदर्शन रोकाले अङ्ग्रेजीमै कविता पढेर सुनाउनुभयो । भीमदर्शनको कविता यहा" धेरैले मन पराए । यही डेरेनमै प्रसिद्ध चिनिया" र्सकस पनि हेरयिो । त्यसपछि साउन १४ गते फेर िपेकिङ् आइपुग्यौ" । त्यसबेला खप्नै नसकिने गर्मी चढिसकेको थियो । एक मनबराबरको वजन भएको चारपाटे आइसको ढिक्का हामी बस्ने सबैको कोठामा राखिदिएका थिए । साउन १६ गते पेकिङ्बाट थाइयान पुग्यौ" र थाइयानबाट पनि फेर िसियान पुगेर सासूबुहारी नामक अपेरा हेर्‍यौ" । अनि, साउन १७ गते सियानबाट हवाईजहाज चढेर हुसानमा पुग्यौ" । हुसानबाट पनि प्रसिद्ध नगर नानकिममा पुग्यौ" ।
यस ठाउ"का अति रमणीय बुद्ध मन्दिरहरूको अवलोकन गर्न पाइयो । यहा"का बुद्ध मन्दिरका भन्तेहरूबाट नेपालको कपिलवस्तुबासी बुद्धभद्रको नाम र उनको अस्तित्व चारैतिर पि"mजिएको कुरा हामीले थाहा पायौ" । यही" नानकिनमा नेपाली बुद्धभद्र र मञ्जुश्रीले आ-आफ्ना ढङ्गबाट छुट्टाछुट्टै 'त्रिपिटक' उल्था गर्नुभएको र बौद्ध धर्मसम्बन्धी महान् कार्य गर्नुभएको कुरा पनि हामीलाई जानकारी गराइयो ।
साउन १८ गते प्रसिद्ध साङ्र्घाई सहरमा पुग्यौ" र १९ गते साङ्र्घाईको क्लासिकल अपेरा हेर्‍यौ" । अनि, साउन २० गते प्राकृतिक सुन्दरताले विश्वमै ख्याति पाएको हान्चाउमा पुग्यौ" । हान्चाउको तालमा नौकाविहार गरयिो । त्यो अवसरमा डुङ्गामा बसेर अति रमाइलो मान्दै धर्मराज थापाले गीत गाउनुभयो । खिमबहादुरले सारङ्गी र मैले गिलासको जलतरङ्ग बजाए" ।
साउन २१ गते हामी हान्चाउबाट फर्केर फेर िसाङ्र्घाईमा पुग्यौ" । साउन २३ गते साङ्र्घाईबाट रेल चढेर साउन २५ गते उही क्यान्टनमा पुग्यौ" । क्यान्टन पुगेपछि भाइस गभर्नरले बफे पार्टर्ीीदनुभयो । त्यस अवसरमा समले नवरसको अभिनय देखाउनुभयो र चित्तभरले नवरसका चित्रहरू उठाएर देखाइदिने काम गर्नुभयो । यहा" पनि अङ्ग्रेजीमा कविता सुनाएकामा भीमदर्शनको सबै चिनिया"हरूले प्रशंसा गरे । धर्मराज थापाले उही गीत सुनाएर सबैलाई लठ्ठ पार्नुभयो । साउन २६ गते क्यान्टनमा संस्कृतिमन्त्रीले बिदाइको पार्टर्ीीदनुभयो । समले दर्ुइ घन्टासम्म कलाकार अरनिकोबारे बोल्नुभयो । संस्कृतिमन्त्रीले समको धेरै तारपिm गर्नुभयो ।
त्यसपछि चित्तधर हृदयले पनि मञ्जुश्रीका बारेमा आधा घन्टा बोल्नुभयो । धर्मराज थापाले फेर िउही 'ए चिनिया" नानी' भन्ने गीत सुनाएर सबैलाई लठ्ठ पार्नुभयो । खिमबहादुर गर्न्धर्वको सारङ्गी र तोपमानको मादलमा मायादेवी र गुनादेवीका नृत्यका साथै अन्त्यमा मेरो उही 'टुम्बोरङि् डान्स' भयो । एक महिनासम्म हामीलाई गाइड गर्दै चीन भ्रमण गराएका म्याडम च्याङ्, यू यान र मिस्टर ली एक दिनअगाडिदेखि नै दिक्क मान्न थालिसक्नुभएको थियो । उहा"हरूको मलिनो अनुहार देखेर नमीठो लाग्न थालिसकेको थियो । आखिर साउन २८ गते क्यान्टनबाट छुट्टनिे बेलामा रुवाबासी नै मच्चियो । टिटीको सिटी लाग्दा पनि रेलका चालक एकछिनसम्म घोरएिर ट्वाल्लै पररिहे । र, इन्जिन चालकको छेउमै टिटी आएर झन्डा हल्लाएपछि बल्ल रेलले आफ्नो गति लियो । रेलको झ्यालबाट हामी सबैले हात हल्लाइरह्यौ" ।
-थापाको भर्खरै प्रकाशित पुस्तक हि"ड्दा-हि"ड्दै बनेका तस्बिरहरूबाट)
Posted by Narthunge at 5:01 AM No comments:
Posted by Narthunge at 5:42 AM No comments:
काठमाडौं/ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आठवटा क्षेत्र किटानी गर्दै संघीयताको नमुना प्रस्ताव गरेको छ । माओवादीपछि संघीयताको स्वरूपबारे धारणा सार्वजनिक गर्ने दोस्रो पार्टी राप्रपा भएको छ । राप्रपा नेतृ रोशन कार्कीका अनुसार संघीयताको अवधारणालाई अभ्यास गर्न राप्रपाले मुलुकलाई आठवटा क्षेत्रीय संरचनामा विभाजन गरी त्यसअनुरूपको पार्टी संरचना निर्माण गरेको छ । तर, नेपालगन्जमा सोमबार सम्पन्न सो पार्टीको बैठकले संघीयतामै जानुपर्ने निर्णय भने गरिनसकेको नेतृ कार्कीले जानकारी दिइन् ।उनका अनुसार राप्रपाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरलाई समेटेर उपत्यका विशेष क्षेत्र उपत्यकाबाहेक बागमती अञ्चलका ६ जिल्ला र सिन्धुलीसमेत जोडेर बागमती क्षेत्र, नारायणी र जनकपुर समेटिएको पूर्वी तराई, गण्डकी र धौलागिरि समेटिएको मध्य क्षेत्र, मेची र कोसी समेटिएको मेची-कोसी क्षेत्र, राप्ती र भेरी समेटिएको मध्यपश्चिम, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्र गरी आठवटा क्षेत्रमा राप्रपाले विभाजन गरेको छ । 'क्षेत्र, जनसंख्या, संस्कृति, धर्म, समानता सबै हिसाबले आठ क्षेत्रमा बाँडेका हौं,' राप्रपा नेतृ कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, 'तर संघीयताको नमुना यहीअनुरूप नै हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा होइन, यसबारेमा पछि निर्णय हुनेछ ।'
Posted by Narthunge at 5:02 AM No comments: